စူပါမာရီယိုကို Run ကို Nintendo ၏ပထမဦးဆုံး iPhone ကိုမာရီယိုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်
by ဂျင်မ် Squires
ရှိနေတတ်တယ်-a-ငါ့ကို iPhone ကို-ဏ!
သောအခါကြှနျုပျတို့ကစားလိမ့်မည်: ကို Nintendo သူတို့ 2016 ခုနှစ်တွင်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်သို့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူပြီးလိမ့်မယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့်အခါလူတိုင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းပေါ်ခဲ့တဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရှိခဲ့သည် မာရီယို ? ဒါဟာရရှိရန်ကြီး Miitomo နှင့် Pokemon GO နည်းလမ်းများစွာအတွက်အားရစရာကြီးပေမယ့်ရေပိုက်သမားခုန်ခြင်းနှင့်မင်းသမီးလေးကယ်ဆယ်ရေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိခြင်းရှိ၏။ Apple ရဲ့စက်တင်ဘာလ 2016 စာနယ်ဇင်းအဖြစ်အပျက်မှာကျွန်တော်တစ်ဦးမာရီယိုက iPhone ဂိမ်းတူမယ်လို့အတိအကျအဘယ်အရာကိုသင်ယူနှင့်ကျွန်တော်ကစားပါလိမ့်မယ်အခါ။
စူပါမာရီယို Run ကို App Store မှာ ... ဒီဇင်ဘာလ 15, 2016 ကနေလာမယ့်တစ်ဦး Auto-running platform ပါ! ဒီဂိမ်းလည်းအန်းဒရွိုက်မှခေါင်းနှစ်လုံးပါလိမ့်မည်, သို့သော်ရှေးရှေးအခိုငျအမာလွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲများအတွက် 2017 သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။
သင်မည်သို့စူပါမာရီယို Run ကို Play သလား?
သူကအလိုအလျှောက်မျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်ပြီးပြေးအဖြစ်ကစားသမားမာရီယိုကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ နှိပ်မာရီယိုခုန်စေမည်နှင့်ကြာကြာဘုံဘိုင်ကသူ့ကိုပိုမိုမြင့်မားခုန်စေမည်။ ကစားသမားဂန္စူပါမာရီယိုတည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာအမျိုးမျိုး navigate ဤထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ နှစျဦးတည်နေရာ - ကမ္ဘာ့ဖလား 1 မြက်ခင်းပြင်များနှင့်သူဌေး-Level ရဲတိုက် - စက်တင်ဘာစာနယ်ဇင်းဖြစ်ရပ်စဉ်အတွင်းအရေးယူမှာပြခဲ့ကြသည်။ စူပါမာရီယို Run ကိုများအတွက် App Store ကို preview ကိုစာမျက်နှာသင်တို့ကိုလည်းစူပါမာရီယို Bros ကမ္ဘာကြီး 1-2 ကနေသတိရစေခြင်းငှါမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့် dank မရဏထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
auto-running ပလက်ဖောင်း Ubisoft ရဲ့ Rayman လွှတ်ပေး (Rayman Jungle Run ကို, Rayman Adventures ကို) တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကောင်းသောဥပမာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နှင့်တကွ, App Store ကိုအပေါ်မျှမျှတတဘုံဖြစ်ကြသည်။ စူပါမာရီယို Run ကိုကစားသမားတဦးတည်းလက်ဂိမ်းကိုခံစားနိုင်အောင်ပုံတူ mode မှာဂိမ်းတင်ဆက်ထားပါတယ်အဲဒီကနေမတူညီတဲ့ချဉ်းကပ်ယူပါလိမ့်မယ်။
"သင်တစ်ဦးဟမ်ဘာဂါမစားနေစဉ်မြေအောက်ရထားပေါ်တွင်လက်ကိုင်ဖို့အပေါ်ကိုကိုင်ပြီး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးက Apple အစာစားနေစဉ်စဉ်ကစားနိုင်ပါတယ်" ဟုကို Nintendo ရဲ့ Shigeru Miyamoto Apple ရဲ့စက်တင်ဘာလအဖြစ်အပျက်မှာစင်မြင့်ပေါ်တွင်ကဆိုသည်။
အဘယ်အရာကို & # 39; s ကိုဘားပြုပ်ပြိုင်ပွဲတိုက်ပွဲ Mode ကို?
စူပါမာရီယိုကို Run ထဲမှာဒုတိယ mode ကို, ဘားပြုပ်ပြိုင်ပွဲတိုက်ပွဲ Mode ကိုကစားသမား asynchronously ဆိုတာကတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ပါစေပါလိမ့်မယ်။ အဓိက mode မှာအဆင့်-based စိန်ခေါ်မှုများနှင့်မတူဘဲဘားပြုပ်ပြိုင်ပွဲတိုက်ပွဲ Mode ကိုယှဉ်ပြိုင်ရိုက်နှက်ဖို့တတ်နိုင်သမျှမြင့်မားတဲ့ရမှတ်ရဖို့ကစားသမား tasking ဆင်းလူမိုက်ကံကောင်းတဲ့ timer နေရာမှာနှင့်အတူအဆုံးမဲ့စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ကြသည်။
ကစားသမားနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ရမှတ်ရရှိမည်: ဒင်္ဂါးပြားစုဆောင်းနှင့်အထင်ကြီး Feat ဖျော်ဖြေခြင်းအားဖြင့်အဆင့်တစ်လျှောက်လုံးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားဘားပြုပ်အထင်ကြီးသည်။ ကစားသမားများကိုလည်းဆန့်ကျင်ကစားသမားစင်မြင့်ကိုယူထားပါတယ်လမ်းကြောင်းကိုပြသတဲ့ ghosted "စတစ်ကာ" နဲ့, သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ၏အောင်မြင်မှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထိုအစွဲမှတ်ဘားပြုပ်သင့်ရဲ့ရမှတ်မှ add ထက်ပိုပြုကြလိမ့်မည် - သူတို့သည်သင်တို့ကိုအလွန်ကိုယ်ပိုင်မှိုနိုငျငံတျော၌နိုင်ငံသားများဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကစားသမားသူတို့တစ်ဦးတည်းကိုအုပ်စိုးနိုငျသောမှိုင့်နိုင်ငံတော်စိတ်ကြိုက်ရရှိခဲ့သည်ဒင်္ဂါးပြားသုံးဖြုန်းလိမ့်မယ်ဘယ်မှာစူပါမာရီယိုကို Run ထဲမှာတတိယနှင့်နောက်ဆုံး mode ကို, ဖြစ်ပေါ်လာသော။
Will စူပါမာရီယို Run ကိုဘယ်လောက်?
စူပါမာရီယို Run ကိုလူတိုင်းမပါကုန်ကျစရိတ်မှာဂိမ်းတစ်ခုအရသာကိုခံစားခွင့်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ မာရီယိုရဲ့စွန့်စားမှုဆက်လက်လိုသောကစားသမားတစ်ဦး set ကိုဝယ်ယူစျေးနှုန်းမှာတစ်ဦး In-app ကိုဝယ်ယူအောင်တို့ကဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာငါဒါဟာ Play နိုင်သလား?
စူပါမာရီယို Run ကိုရရှိနိုင်ပါသည်အခါသင်အကြောင်းကြားချင်ပါတယ်ဆိုလျှင်, သင့် iOS device ပေါ်တွင် App Store ကိုအပေါ် "စူပါမာရီယို Run ကို" ကိုရှာဖွေလျက်, ဂိမ်းကစားရရှိနိုင်ဖြစ်လာသည့်အခါတစ်ဦးတွန်းအားပေးသတိပေးချက်ရဖို့ခလုတ် "ကိုအကြောင်းကြား" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ Nintendo ကဒီကျဆုံးခြင်းကို iOS 10 ပစ်လွှတ်အတူ iMessage များအတွက်စူပါမာရီယိုစတစ်ကာ set ကိုစတင်ပါလိမ့်မည်။ မီးအထိမ်းအမှတ်တွေကိုနှင့်သတ်မှတ်ထားကို Nintendo ရဲ့လာမယ့်မိုဘိုင်းဂိမ်းများ, တိရိစ္ဆာန် Crossing franchise, မတ်လ 2017 မကုန်မီဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားကြပါတယ်။
အကောင်းဆုံးက Google Cardboard VR အားကစားပြိုင်ပွဲထဲက Check မှ
ဆိတ်သငယ်ကို Simulator သိကောင်းစရာများနှင့် Tricks
သင့်ရဲ့ iPhone ကို 10 ကြောက်စရာထိတ်လန့အားကစားပြိုင်ပွဲ
အိတ်ကပ် Mortys ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဒါဟာရုံလိုပဲ Pokemon င်
မည်သို့တစ်ဦးကဒဏ္ဍာရီ Monster Legends အဖွဲ့ Build ရန်
အဘယ်ကြောင့် CSR ပြိုင်ပွဲ2Play? ဒါဟာကားများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
စူပါမာရီယို Run ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါစီးရီး '' 25 နှစ်မြောက်အပေါ် Sonic ၏သမိုင်း
Star Wars: အဆိုပါအင်အားစုတိုက်ဖျက်မည် cheat - PS3
OS X ကိုအတွက် Compressed မှတ်ဉာဏ်ကိုနားလည်ခြင်း
Puran ကို Defrag v7.7.1
Cracked က iPhone screen များအတွက်ပြုပြင်ခြင်း Options ကို
ထိပ်တန်း 10 လူကြိုက်အများဆုံးအခမဲ့ PC ကိုဂိမ်းများ
OS X ကိုရဲ့ Disk Utility အသုံးပြုခြင်း
မှတ်တမ်းများ DVD format ဘာတွေလဲ?
တစ်ဦး ASF ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
မည်သို့မှ Re-Download Apps ကပယင်းကို Mac App Store မှာ မှစ.
Spotify vs Apple ကဂီတ: အဆိုပါအကောင်းဆုံးဂီတဝန်ဆောင်မှု Is ဘယ်?
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge အတွက် Web ကိုမှတ်ချက်အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Shortcut ကိုသော့ချက်များကိုသုံးပြီး Excel ကိုအတွက် Save
Linksys EA2700 ပုံမှန် Password ကို
တစ်ဖျအရောင်မှိန်မွမ်းပုံ Effect Create ရန်ကဘယ်လို
ဝင်းနိုင်ထွန်း HTP-551 5.1 မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံပက်ကေ့
ခိုင်ခံ့သောစကားဝှက် Creating6Techniques
Wi-Fi ရှင်းလင်းချက်: အသုံးအများဆုံးကြိုးမဲ့ LAN ကွန်ယက်
သင်က Play စေချင်6Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲ